Akụkọ - Kedu mgbe ị na-eji agịga inoculating kama loop?
Ị ga-eji agịga inoculating mgbe ị na-eme smears site na mgbasa ozi siri ike n'ihi njupụta siri ike.Ebe ndị pere mpe pere mpe, yabụ ọ dị mfe iji agịga inoculating weghachi ihe atụ ndị a.Gịnị kpatara iji agịga kama iji akaghị inoculating?
Kedu otu esi eji agịga inoculum na omenala?
A na-agbanyekarị inoculum na omenala ofe, omenala ndị na-adịghị mma, omenala efere, na omenala nsị.A na-eji agịga inoculation eme ihe n'ịkụnye omenala ofe na-adịghị ọcha.Ịkụnye nsọtụ oghe nke efere ahụ ọkụ ga-eme ka ọ ghara ịdị ọcha.
Kedu ka agịga inoculating si arụ ọrụ na efere petri?
agịga inoculating a nwere aka rọba nwere loop nichrome waya iji bufee nje bacteria site na omenala gaa na efere petri.Wepu akaghị aka n'etiti mbufe site na iji ọkụ wee kpoo akaghị aka ruo mgbe ọ na-enwu.Kwe ka loop ahụ dị jụụ tupu ịtinye na omenala nje bacteria ma ọ bụ okpomọkụ ga-egbu nje bacteria na-ebufe.